Kachasị kọlụm uPVC & ụlọ ọrụ na -emepụta ọkpọkọ casing na India
UPVC kacha mma
Onye na -emepụta kọlụm kọlụm Pipe kọlụm uPVC na-enweghị nchara 100% nwere mkpọchi ike maka ịrụ olulu mmiri dị mma Lee Range
Budata Katalọgụ UPVC HDPE Pipe
emeputa Mmepe nke mmepeanya na ụlọ ọrụ n'ozuzu egosila na ọ na -arụsi ọrụ ike na mbibi nke oke ọhịa nke na ihe niile emere maka nchekwa na imepụta ha adịchaghị mkpa ma e jiri ya tụnyere ya. Lee Range Budata Katalọgụ
Na -achọ kọlụm uPVC & PVC Casing Pipe?
Ụlọ ọrụ na -emepụta ọkpọkọ mmiri uPVC
N'ịbụ onye na-eduzi njikwa mmiri mmiri ISO 9001, akara nrụpụta ọkpọ sitere na India, anyị na Vinyl Tubes, na-elekọta mkpa njikwa mmiri gị niile. Anyị na -enye Ọkwa kọlụm uPVC kacha mma, Ọkụ mkpuchi & Ọkwa ihuenyo dị mma, Piezometric Pipes, Pipes, SWR Pipes, Pipes Drainage na Piping Pipes maka mkpa njikwa mmiri gị. Anyị na -enye ndị ahịa anyị ihe ngwọta ngwaahịa kacha mma site na ihe ọhụrụ mgbe niile, imepụta oke ihe, usoro dị iche iche na ngwaahịa dị mma.
gụkwuo banyere anyi
Iji nweta ọnọdụ onye ndu site na ịnye ngwọta dị ọnụ ala maka ọkpọkọ mmiri, na -ahụ afọ ojuju ndị ahịa site n'itinye aka na ọganiihu ha.
Onye ndu zuru ụwa ọnụ na ọkpọkọ mmiri Ka ịpụta dị ka onye ndu ụwa niile na ụlọ ọrụ ọkpọkọ mmiri site na mmepe na nnabata nke teknụzụ ọhụrụ na usoro na -adịghị agwụ agwụ nke ịgbanwe echiche ọhụrụ n'ime ihe dị adị n'ezie.
Mgbaru Ọsọ anyị
Iji mee ka mmiri ọ bụla na -agba mmiri nke ọma n'ụwa niile na -arụ ọrụ nke ọma yana oke nchekwa yana na -enwe ike ị nweta ego oge niile. Yabụ, anyị na -atụ anya ịchekwa ọkụ eletrik ijeri 1.3 site na mbọ anyị.
Ngwaahịa uPVC anyị na -enye
Ndị ọkachamara na -ahụ maka mmiri
Ọkwa kacha mma uPVC kọlụm ọkpọ nrụpụta 100% ọkpọ ọkpọ uPVC na-enweghị nchara nwere mkpọchi ike maka ịrụ olulu mmiri dị mma n'ụlọ Ọrụ anyị uPVC…
Pipe nrụgide uPVC
A na -enye ọkpọkọ nrụgide uPVC nwere oghere dị larịị ma dabara maka njikọta ciment na ihe mgbaze na arịrịọ. Isi ngwa nke uPVC Pipes dị na ọrụ ugbo, maka inye mmiri, ịgba mmiri mmiri, ahịrị mmiri mmiri, wdg yana nkesa nkesa mmiri ọ drinkingụ drinkingụ.
Kedu ihe kpatara ọkpọkọ vinyl?
Enwere naanị otu ihe kpatara ị ga -eji họrọ ọkpọkọ vinyl maka mkpa njikwa mmiri gị: ntụkwasị obi, ịkwụwa aka ọtọ na ntụkwasị obi. Tụkwasịrị obi na mba 44 nwere ihe karịrị ndị nkesa 100+ n'ụwa niile, makwaara maka ntụkwasị obi maka ọgbọ 4 gara aga, anyị nọ na Vinyl, na -enye ọkpọkọ nwere mmesi obi ike na nkwa nke ụdị ngwaahịa anyị.
Vinyl gbara mbọ inye ndị ahịa ya ngwaahịa dị elu na enweghị ntụpọ site na mmemme nke mmelite na-aga n'ihu. Ogo na -ebute ụzọ karịa ọnụọgụ, nke bụ ụkpụrụ ụlọ ọrụ ahụ. Vinyl na-akwado ndị ahịa ya site na ọrụ teknụzụ na-eduzi ụlọ ọrụ, yana nkwado teknụzụ na ọzụzụ.
Ndị ọrụ ruru eru
Mmalite nke Vinyl na -alaghachi azụ na 1941, wee guzobe ya dị ka azụmahịa ezinụlọ na -agba. Na 1971, Vinyl guzobere ụlọ ọrụ PVC mbụ na North India. Ugbu a nke ọgbọ ezinụlọ nke atọ na-agba ya, Vinyl pụtara dị ka azụmaahịa na-aga nke ọma yana ọtụtụ iri afọ ọkachamara n'azụ ya.
Omenala siri ike
Vinyl na -etu ọnụ maka ndị na -arụ ọrụ siri ike ma nwee ikike, lekwasịrị anya n'ịrụpụta ngwaahịa ọsụ ụzọ. N'ihi ahụmịhe dị na ụlọ ọrụ ahụ, Vinyl enwewo ike chepụta PVC na ọkpọkọ uPVC nke na -enye mfu obere esemokwu. Vinyl ewepụtakwala mkpọchi ike na-echere ka ejiri ya na ọkpọkọ kọlụm.
Ụlọ ọrụ Vinyl dị na North India na -agbasa mpaghara 65,000 sq.m, nwere ahịrị nhazi ọkpọkọ German, yana ihe karịrị igwe CNC iri na abụọ. Ha na -ahazi 12,000 MT nke uPVC kwa afọ n'ime kọlụm, casing, SWR na ọkpọ ọkpọ. Ụlọ ọrụ ọhụrụ na -abịa n'obodo Kandla nke nwere ọdụ ụgbọ mmiri, na -enye Vinyl ohere nke nnyefe ụwa ngwa ngwa.
Anyị na -enye ahụmịhe
Ngwa uPVC Pipe
Ịgba mmiri / Ọrụ Ugbo
Ọdụdọ / Nkwukọrịta
Ọkpụkpụ VINYL Maka Onye ọ bụla
Anyị bụ ndị na -eduga akara njikwa mmiri ISO 9001
Ụlọ maka ndị nwe ya
Ndi oru ugbo
Ndị na -enye mmiri
Ekwela nkwa. Ọnọdụ nka na ISO, NSF, WRAS, ASNZ, CE - EUROGLOBAL gbaara ezi àmà.
Uru nke ọkpọkọ VINYL
IHE ndị ahịa anyị na -ekwu
Afọ ojuju ndị ahịa
“SCG na -aga n'ihu na -enye ọrụ pụrụ iche na ikike teknụzụ dị mma maka ọrụ dị iche iche site na obere ruo na nnukwu. Nke kachasị mkpa bụ SCG na -agba mbọ ịghọta ebumnuche ebumnuche n'ozuzu ya yana ịnye azịza dị irè ma dị irè. Nrara ha raara nye ọrụ pụrụ iche pụtara ìhè n'ọrụ ọ bụla ha na -arụ. “
“N'ime ihe karịrị afọ iri na -arụkọ ọrụ na ụlọ ọrụ SCG na saịtị mmetọ gburugburu, ha gosipụtara ike teknụzụ dị mma mgbe ha na -ahụ maka ọrụ ndị ahịa ka mma. Ụzọ ha na -emekọ ihe ọnụ na mgbanwe oge dị adị n'ịgbanwe ọnọdụ dị iche iche enyela aka na ihe ịga nke ọma nke ọtụtụ ebumnuche oru ngo. “
“N’oge mụ na SCG rụkọrọ ọrụ a, achọtala m Mike Campbell na ndị otu ya maara nke ọma ma rụpụta nsonaazụ ya. Dabere na mbido ule nnwale na nghọta siri ike banyere ala. ọnọdụ, ọkachasị ebe mgbada gbajiri agbaji. weghaara oru ha na oru a. "
Ịmepụta Ọdịnihu nke Mmiri
Kedu ihe na -aga na blọgụ anyị?
Kpọtụrụ ụlọ ọrụ anyị maka ọnụego efu! Ọ dị mma mgbe niile inwe echiche siri ike na mmefu ego gị
n'oge a ka anyị nwee ike ikwu okwu dịka ọ dị mkpa
Mgbasawanye mmiri na sistemụ nsị na -abawanye n'ike n'ike n'ihi corrosion, leaks, na gbajie na ngwongwo igwe na -eme ka ikike anyị nwee ịdị ọcha na…
“Ahịa na-agbanwe agbanwe, ndụmọdụ dị mma bụ ịge ntị ebe ahịa na-aga ma megharia akụrụngwa gị, azụmaahịa, webụsaịtị ka ọ dabara…
Ụkpụrụ dị mma na ihu igwe ọjọọ na ọnọdụ mpaghara na -agbanwe JA Trudeau ka ọ bụrụ ọkpọkọ Vinyl butere ọkpọkọ kọlụm ya na Russia na mpaghara CIS…
Ọrụ nchịkwa mmiri na -eji nfuli na -emikpu mmiri na -adabere na ọkpọkọ ọkpọ iji napụta mmiri nke ọma n'olulu mmiri. Dị ka nke a, na -achọpụta ịdị mma dị elu nke…
Ọ bụrụ na ị bụ Borewell Driller ma ọ bụ onye na -eweta mgbapụta & ọkpọkọ ma ka na -eji ọkpọ ígwè eme ihe, blọọgụ a bụ maka gị. Ị ga-emerịrị ya…